Izindleko zokudla okunomsoco ngezinkinga zomlenze
Igama elithi "izithasiselo zokudla" libonisa ukuthi lezi zidakamizwa zingumnikelo wokudla. Izindleko zokudla okunempilo azishintshi, kodwa zengeze ukudla, okumele kube okuhlukahlukeneyo nokulinganisela.
Lesi sihloko sichaza izinhlobo ezihlukahlukene zokudla okusiza ukuthuthukisa ukujikeleza kwegazi nokuvimbela ukutholakala kwemivamisa ye-varicose noma izinkinga zayo. Naphezu kokuthi izilinganiso eziphakanyisiwe zizoboniswa lapha, kunoma yikuphi, uma umuntu ekhetha ukuthatha isifundo sokuthatha noma imuphi umuthi, kungcono ukubonisana nodokotela. Cabanga ukuthi ukudla izithasiselo zokudla ngaphandle kwesidingo esikhethekile kubo kungabangela ubuthi emzimbeni, ngoba, mhlawumbe, ngeke ukwazi ukuwasebenzisa.
Abesifazane abakhulelwe kufanele bakhumbule ukuthi kumele baxoxe nodokotela wabo ngaphambi kokungeza noma yini yokudla ekudleni kwabo.
Izithako zokudla okunomsoco ukuthuthukisa ukujikeleza kwegazi
Isilinganiso esinconywe: 50 mg izikhathi ezimbili ngosuku.
Amazwana: iqinisa imisipha yenhliziyo, ivuselela ukujikeleza kwegazi, ikhuthaza ukukhanya kwe-chain long fatty acids, futhi ithathe indawo ye-fatty acid shunthetic shunt nge carbohydrate, okungukuthi, inomthelela wokugcoba amafutha.
Isilinganiso esinconywe: ngokusho izinkomba zephakheji.
Amazwana: kuthuthukisa ukujikeleza kwegazi futhi kukhuthaza ukwakheka kwamaseli anempilo. Kungenzeka ukuyifaka efomini eliqhekekile noma kumaphilisi, futhi futhi ukulungisa ukuphuza iziphuzo eziluhlaza eziluhlaza.
Isilinganiso esinconywe: 100 mg ngosuku.
Amazwana: kuthuthukisa ukondleka kwezicubu nge-oxygen.
Isilinganiso esinconywe: 1 isipuni 1 izikhathi nsuku zonke ngaphambi kokudla.
Amazwana: ahlukanisa amafutha.
Isilinganiso esinconywe: 2400 mg izikhathi ezintathu nsuku zonke ngaphambi kokudla.
Isilinganiso esinconywe: ngokusho izinkomba zelebula.
Amazwana: Usiza ukugaya nokujikeleza kwegazi, kuthuthukisa umsoco wazo zonke izicubu zomzimba nge-oxygen. Ukwamukela kuyadingeka ngesikhathi sidlo.
Inhlanganisela yamavithamini weqembu B
Isilinganiso esinconywe: 50-100 mg izikhathi ezintathu ngosuku.
Amazwana: kudingekile ukuba umzimba we-fat kanye ne-cholesterol. Ingasetshenziswa njengemjovo yevidiyo (ngaphansi kokuqondiswa udokotela) noma amaphilisi ngaphansi kolimi.
I-Vitamin B1 (thiamin)
Isilinganiso esinconywe: 50 mg ngosuku.
Amazwana: kuthuthukisa ukujikeleza kwegazi nokusebenza kobuchopho.
I-Vitamin B6 (i-pyridoxine)
Amazwana: i-diuretic yemvelo, ivikela inhliziyo.
Isilinganiso esinconywe: 400 mg ngosuku.
Amazwana: kuyadingeka ekwakheni amangqamuzana abomvu egazi athuthela umoya-mpilo.
I-Vitamin C nge-bioflavonoids
Isilinganiso esinconywe: 5000-10000 mg ngosuku, ihlukaniswe ngezimpendulo eziningana.
Amazwana: kuvimbela i-thrombosis.
Isilinganiso esinconywe: 1500-2000 mg ngosuku ngosuku oluthile
Amazwana: adingekayo ukuze i-viscosity yegazi ejwayelekile. Thatha emva kokudla kanye namazwi.
Izinga eliphakanyisiwe: 750-1000 mg ngosuku, lihlukaniswe ngezimpendulo eziningana.
Amazwana: Uqinisa imisipha yenhliziyo. Thatha emva kokudla nangaphambi kokulala.
I-Dimethylglycine (i-DMG) (i-DMG-125 de Douglas)
I-Multivitamin ne-mineral complex
Amazwana: ngokulinganayo asakaza izakhi, okubaluleke kakhulu ekujikelezeni kwegazi okuvamile.
Izinga eliphakanyisiwe: 50,000 IU ngosuku. Abesifazane abakhulelwe akufanele bathathe ngaphezu kuka-10 000 IU ngosuku.
Amazwana: ikhuthaza ukuqoqwa kwamafutha e-acids ebalulekile, i-antioxidant.
Isilinganiso esinconywayo: qala nge-200 IU futhi ukwandise kancane umthamo ube ngu-1000 IU ngosuku.
Amazwana: Vimbela ukwakheka kwama-radicals wamahhala. Thatha ngesimo se-emulsion.
Izindleko zokudla okunomsoco zinconywa ukuba zibeke imilenze ekhandlayo nemilenze ye-varicose
Amazwana: ithuthukisa ukudla okunomsoco we-tishu nge-oxygen futhi ishesha ukujikeleza kwegazi, iqinisa ukuzivikela.
Isilinganiso esinconywe: ngokusho kokuqokwa kochwepheshe.
Amazwana: kuthuthukisa ukusetshenziswa kwamaseli e-oxygen futhi kwandisa ukuzivikela komzimba.
Amazwana: avuselela amasosha omzimba kanye nokujikeleza kwegazi, ahlukumeze ama-radicals mahhala futhi aqinise izicubu ezihambisanayo, kuhlanganise nesimo senhliziyo.
Isilinganiso esinconywe: 3000-6000 mg ngosuku
Amazwana: anciphisa ukuthambekela kwe-thrombosis.
Amazwana: wephuthumisa ukujikeleza kwegazi futhi evimbela ukulimaza.
Isilinganiso esinconywe: 50 mg izikhathi ezintathu ngosuku.
Amazwana: kuthuthukisa ukujikeleza kwegazi, kusiza ukugcina imithwalo yegazi inwebeka.
Isilinganiso esinconywe: qala nge-400 IU futhi ukwandise kancane kancane ube ngu-1000 IU ngosuku.
Amazwana: kuthuthukisa ukujikeleza kwegazi futhi kusiza ukuvimbela ubunzima emilenzeni.
Amazwana: aqukethe amaprotheni nama-vithamini B adingekayo kulezi zimo.
Isilinganiso esinconywe: isipuni 1 isipiliyoni ngosuku ngosuku lokudla.
Amazwana: kuthuthukisa ukujikeleza kwegazi.
Isilinganiso esinconywe: 1200 mg izikhathi ezingu-3 ngosuku.
Inhlanganisela yamaminerali e-Multivitamin
Amazwana: Ugcina ibhalansi yazo zonke izakhi ezidingekayo.
Izinga eliphakanyisiwe: 10,000 IU ngosuku.
Amazwana: kuqinisa ukuzivikela komzimba, kuvikela amangqamuzana nokunciphisa ukuguga.
Inhlanganisela ye-carotenoids yemvelo
Amazwana: Okunye okuhle kulo muthi ngu-Ocanico de Solgar.
Isilinganiso esinconywe: 50-100 mg izikhathi ezintathu ngosuku ngokudla.
Amazwana: kudingekile ukugaya ukudla.
Amazwana: aphumelele ngokwengeziwe kokungeniswa kwezilinganiso (okungukuthi, ngaphansi kolimi).
Isilinganiso esinconywe: 300-1000 mg ngosuku.
Isilinganiso esinconywe: 1000 mg ngosuku ngaphambi kokulala.
Amazwana: kusiza ukuchofoza.
Isilinganiso esinconywe: 1500 mg ngosuku ngaphambi kokulala
Amazwana: kuqinisa izicubu zethambo.
Isilinganiso esinconywe: 750 mg ngosuku ngaphambi kokulala.
Amazwana: Kukhuthaza ukuphumula komzimba wezitsha nezitho zangaphakathi.
Isilinganiso esinconywe: 80 mg ngosuku.
Amazwana: kukhuthaza ukuphulukiswa kwesilonda.
Amakhambi omphakathi wokwenza ngcono amandla omuntu
Imithi yokwelapha yokuphathwa kwezinso
Ukupheka kwabantu ukuphathwa kwama-acne
Ukwamukelwa kwe-Acupuncture: Ukulahlekelwa kwesisindo ngokushesha
Ungasusa kanjani isisu sebhiya?
Ungasusa kanjani ukuhlehlisa okukodwa
Ngezinzuzo zamafutha e-burdock
Ungakhetha kanjani isipho esifanele uneminyaka emibili ubudala?
Imfundo ngaphandle kokuphoqelela
Iyini ukusetshenziswa kokulawula imizwa yakho?
Imigomo yokusetshenziswa kokuhlolwa kokukhulelwa
U-Irina Bezrukova waba yingxenye yombukiso othi "Ukudansa Ngezinkanyezi"
Indoda yebhizinisi elihle: indlela yokukhetha i-suit ephelele yebhizinisi
Iqiniso lonke mayelana nokudla kusihlwa!
Indlela yokumazi indoda e-intanethi
Kudla ukuzuza isisindo
Ukunamathiswa okuvamile kwe-Carbonara
Ukunciphisa ngokusebenzisa umzimbaflex
Iqiniso elesabekayo mayelana ne-chips
Into esabekayo kunazo zonke emhlabeni yisimo sezungu
Yini elindele wena uma udoba ephusheni?
Indlela yokukhipha umkhuba omubi - ukubhema
Imikhono nokunakekela isikhumba se-decollete